Yuusuf Indha Cadde oo Sadax Arimood ku sifeeyay Sababta ay Al-Shabaab u aadeen Deegaanada Puntiland - iftineducation.com
iftineducation.com – Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha Cadde) ayaa ka hadlay Sababta ka dambeysa in xiligan dagaalyahano badan oo katirsan Al-Shabaab ay gaaraan Deegaanada Xeebta ah uu ka arimiyo maamulka Puntiland.
Waxa uu sheegay Yuusuf Indha Cadde in qorshaha ay Al-Shabaab u tageen deegaanada Puntiland in ay tahay Sadax Arimood uu tilmaamay in ay ka mid yihiin in ay qal qal galiyaan amaanka maamulka Puntiland iyo in ay aag Cusub oo dagaal ay ka furaan Deegaanada Puntiland.
Indha Cadde ayaa sidoo kale ku tilmaamay qorshaha sadaxaaad ee Al-Shabaab ugu duuleen deegaanada Puntiland in ay tahay in ay doonayaan in ay xoog kusoo furtaan maxaabiis badan oo Al-Shabaab uga xiran Xabsiyada Puntiland.
”Al-Shabaab waxaa jab uu kasoo gaaray dagaalkii ay ka wadeen Koonfurta Soomaaliya, waxa ay hada doonayaan in ay tagaan oo ay xoojiyaan dagaalyahanada kale ee ku sugan buuraha Sil silada ee Golis, qorshaooda waxa uu yahay in ay aag cusub furaan ayna qal qal galiyaan amaanka Puntiland” Ayuu yiri Yuusuf Indha Cadde.
Yuusuf Indha Cadde ayaa sidoo kale hadal aan laga fiirsan ku tilmaamay warkii kasoo yeeray Wasiirka Amniga Puntind oo Dowlada Federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay ka dambeysay Qorshaha Al-Shabaab kusoo aadeyn deegaanada Puntiland.
Waxa uu kula taliyay Maamulka Puntiland in ay Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo maamulada kale ee dalka ka jira sida Maamulka Galmudug kala kaashato sidii loola dagaalami lahaa logana hortagi lahaa Shabaabka ku duulay Deegaanada hoostaga Puntalnd.
Boqolaal Dagaalyahan oo katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa habeen hore Dooman waxa ay uga dageen xeebo kuyaala Deegaanka Garacad iyo deegaano kale oo katirsan Gobolada Mudug iyo Nugaal, waxa ayna arintan cabsi ka abuurtay Deeganada Puntialnd maamulkiisa hoos yimaada.